आन्विका गिरी - कान्तिपुर समाचार
आन्विका गिरीका लेखहरु :
कथा : बुझ्यौ ? के बुझ्थ्यौ !
त्यो दिन अरू दिनजस्तै थियो  । म बिहान ५ बजे नै वाकमा गइसकेको थिएँ  । धुम्बाराहीबाट भत्केको पुल, कालो पुल हुँदै म सिफलको चौर कटेर भण्डारखाल पर्व बगैंचा पुगेको थिएँ । बगैंचाको मुख्य गेट गौशालामा भए पनि म अरू थुप्रैझैं पर्खाल भत्केको ठाउँबाट सुत्त छिरेँ । वा, भनूँ मझैं अरू धेरै छिर्छन् । भित्र नछिरुन्जेलसम्म पनि मलाई दिन उस्तै लागिरहेको थियो । भित्र छिर्दा भने दृश्य अर्कै थियो ।
मलाई लाग्दैन– अहिले पनि यौन दुव्र्यवहारविरुद्धमा हाम्रो परिवार, विद्यालय वा कार्यस्थलमा कसैले हामीलाई, हाम्रा नानीहरूलाई आश्वस्त पारेको छ । मैले काम गरेको कुनै पनि संस्थाले मलाई आजसम्म पनि के तिमी कुनै किसिमको दुव्र्यवहारमा परेकी छौ ? के तिम्रो केही भन्नु छ ? भनेर सोधेको छैन ।